U-Kendall Jenner uchaze ukuthi kungani esula ikhasi ku-Instagram
Ngenjabulo enkulu yebutho lika-68-million-lokubhalisa i-Kendall Jenner ku-Instagram, inkanyezi ye-podium yabe isichazela isinqumo sakhe sokushiya inethiwekhi yezenhlalo futhi yakhuthaza abalandeli bakhe ukuba bathembisa ukubuyela.
NgeSonto, abasebenzisi be-Instagram bafunde ukuthi omunye wabantu abadumile kakhulu kwinethiwekhi yokuxhumana nabantu uKendall Jenner ususe i-akhawunti yakhe ngaphandle kokuchazwa nokuhlaziya. Abalingani bezimodeli, engazi ukuthi bangamfinyelela kanjani, bamkhathaza isihlobo sakhe, esasihlala ekuxhumaneni nomphakathi, enemibuzo.
Ukuqalisa kabusha okuncane
Ukuze angadala injabulo engakahlezi emndenini wakhe, uJenner oneminyaka engu-21 ubudala, egqoke isambatho sesililika, efana ne-pajamas, nesembatho, ngoLwesithathu weza ku-show Ellen Degeneres. U-Kendall uvumile ukuthi akazange asolise ukuthi uhlobo olunjani lwe-resonance lwaluzomcasula, wathi:
"Lokhu kuyingozi! Izwe lonke likhuluma ukuthi ngisuse ikhasi lami ku-Instagram njengokungathi ukuzwa kwe-interplanetary scale. Ngangingazi ukuthi lokhu kungaba inkinga enjalo. Ngangifuna ukugwinya leli khasi okwesikhashana futhi ngingalindelanga ukusabela okunjalo kwesiphepho. "
I-Supermodel nayo yatshela ukuthi kungani yenza lokhu:
"Ngidinga i-detoxification. Ngidinga nje ikhefu. Ngichitha isikhathi sonke ngibheka ifoni. Ukuvula amehlo ami ekuseni, ngaya ku-Instagram, indaba yaphindwa ngaphambi kokulala. Ngokungazelelwe, ngazizwa ngingenasici futhi ngincike ekuxhumaneni nabantu. "
Ekupheleni kwengxoxo, uKendal wanezela ngethemba lokuthi:
"Ngizobuya! Linda, sekusele izinsuku ezimbili kuphela! ".
Net on body naked: Kendall Jenner ngesigqoko ezingenangqondo
U-Kaitlin Jenner ushada nge-transgender model oneminyaka engama-48 emncane kunayo
U-Bella Hadid uhlangana ne-ex-isoka lakhe uKendall Jenner
Ngendlela, ngaphandle kwephrofayili ku-Instagram, uJenner ususiwe ekusebenzeni kweselula kwe-Twitter, kodwa kuze kube manje akakathinti ikhasi ngokwayo.
USean Penn wahlasela isoka lentombi uDylan
UJennifer Lawrence wenqaba ukuxhumana nezintatheli zaseRussia enkomfeni yabezindaba ye-movie ethi "Mama!"
Umdlali webhola uCristiano Ronaldo waba ngubaba wamawele owazalwa nomama ozala izingane
UKim Kardashian ucele bonke abahlanganyeli be-show "I-Kardashian Families" ukuba baqeqeshwe ngokwengqondo
UNicole Scherzinger noLee Hamilton
UMarc Jacobs wenze isoka linikeza izandla nezinhliziyo
I-feminist version ye "Abangane abangu-11" base-Ocean: ihamba noCate Blanchett
IBrooklyn Beckham wamemezela ukukhululwa kwencwadi yakhe yokuqala "Lokho engikubonayo"
Ama-Chanterelles ku-sauce ukhilimu
Indlela yokugeza isibambo ngezingubo ezimhlophe?
Amaqiniso anentshisekelo ngeSweden
Amaphilisi okudla aseThai
Ingabe i-melon ne-melon ingakhulelwa?
Izingubo ezivela ku-guipure 2013
I-Teraflex - Analogues
I-liqueur enamakhaza ekhaya
Ikhophi ye-coprogram ibonisa?
Ungadonsa kanjani i-corset wena?
UCheryl Cole uphinde ukhululekile